I-Apple Pay iazise kwa-Israeli ngoMeyi 5 | Ndisuka mac
I-Apple Pay iazise kwa-Israeli ngoMeyi 5
Ekugqibeleni kubonakala ngathi Kuqinisekisiwe ukuba ilizwe elilandelayo Abasebenzisi bayo baya kuba nethuba lokusebenzisa i-Apple Pay nge-iPhone, i-iPad kunye ne-iPod touch iya kuba ngu-Israel. Kwiveki ephelileyo sipapashe inqaku esikuxelele ngalo malunga nobuchule bokwazisa obu bugcisa bokuhlawula kwa-Israyeli.
La marhe iqinisekisiwe nguHaaretz, inkonzo yokuhlawula ngaphandle konxibelelwano eqinisekisile ukuba nge-5 kaMeyi, abasebenzisi bezixhobo ezihambelana neApple Pay baya kuba nakho ukuqala ukongeza amakhadi abo ahambelana nekhredithi kunye nedebit kwisicelo seWallet.
Isabelo sentengiso se-iPhone kwa-Israyeli phakathi kwama-20 nama-30%Ke ngoko, ukwaziswa kweApple Pay kweli lizwe akuyi kubonisa naluphi na utshintsho olukhulu kubume bendawo wangoku. Ikhomishini egcinwa yiApple kwintengiselwano nganye eyenziwa ngabasebenzisi iyahluka ngebhanki, kodwa umndilili yi-0,05%.
Ngokungafaniyo nokwaziswa kwamanye amazwe, I-Apple Pay iya kuhambelana neebhanki ezininzi kunye nezinto zebhanki Kwilizwe, ngale ndlela, iApple iqinisekisa ukuba uninzi lwabasebenzisi bayo banethuba lokuyisebenzisa kwaye iba lukhetho lokukhetha olukhethiweyo.
Iindaba zokuqala ezinxulumene nokumiliselwa kweApple Pay kwa-Israyeli imihla ukusukela ukuphela konyaka ophelileyo. Izizathu ezibangele ukulibaziseka ekusungulweni kungenxa yokuba uninzi yayingamashishini awayengengowomsebenzi wokungenisa obu buchwephesha kumashishini abo, ingcinga ethi ngethamsanqa itshintshile.
I-Apple Pay iyafumaneka kumazwe angaphezu kwama-50Nangona kunjalo, okwangoku asazi ukuba izicwangciso zokwandisa ziya kwandisa eli nani ngokongeza amazwe athetha iSpanish, apho sifumana khona iMexico neSpain kuphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Pay iazise kwa-Israeli ngoMeyi 5
Kunye nenkulumbuso yothotho lweengcongconi, iApple ipapasha isigcawu esikhethekileyo
Abathengi abatsha abangenayo eApple ngeMacs kunye neePads